Nianjera ny mpiady jet, nipoaka teo imason'ny olona an'arivony tamin'ny seho romanianina
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Nianjera ny mpiady jet, nipoaka teo imason'ny olona an'arivony tamin'ny seho romanianina
Jolay 7, 2018
Mpikatroka romana romana Mikoyan-Gurevich MiG-21 Lancer no nianjera nandritra ny fampisehoana an'habakabaka, nipoaka teo imason'ny olona an'arivony.
Mpandeha fiaramanidina romana no nianjera nandritra ny fampisehoana an-habakabaka, nipoaka teo imason'ny olona an'arivony. Mampiseho ny setroky ny setroka sy setroka setroka ny sary avy amin'ilay sehatra.
Ny Mikoyan-Gurevich MiG-21 Lancer dia nianjera tokony ho tamin'ny 1 ora sy sasany antoandro tamin'ny asabotsy teo, tokony ho 30km (10 miles) avaratry ny Fetesti Airbase any Calarasi County, Romania, nitatitra ny Cotidianul.ro, nanonona ny fanambarana nataon'ny Minisiteran'ny Fiarovana. Ny lozam-pifamoivoizana dia nahafaty ilay mpanamory fiaramanidina lefitra lefitra lefitra, Florin Rotaru, 6.2 taona.
Nilaza tamin'ny fahitalavitra teo an-toerana ireo nanatri-maso fa mety nisafidy ny hianjera amin'ny saha akaiky ny mpanamory fiaramanidina ho fomba iray hisorohana ny famelezan'ny vahoaka. Olona manodidina ny 4,000 no nanatrika ny fampisehoana an'habakabaka, hoy ny Reuters.
Mampiseho ny fotoana taorian'ny fianjerana, ny sary tao amin'ny media sosialy, rehefa nirehitra ny fiaramanidina.
Misy horonantsary mampiseho setroka mainty miakatra avy eo amin'ilay sehatra ihany koa.
Taorian'ilay fianjerana dia nilaza tamin'ny fahitalavitra Romania ny minisitry ny fiarovam-pirenena Mihai Fifor fa ny fiaramanidina Air Force Romanian dia ao anatin'ny “filaminana miasa tonga lafatra” avokoa, ary mbola aloha loatra ny fotoana hanaovana tombantombana ny anton'ilay tranga. Na izany aza, nitatitra ny Cotidanul.ro fa fiaramanidina miG 24 no nianjera nanomboka tamin'ny taona 1994. Ny antony nahatonga ny fianjerana dia eo am-panadihadiana.
Ny Mikoyan-Gurevich MiG-21 Lancer dia fiaramanidina mpiady jet supersonika ary mpanelanelana fiaramanidina namboarina nandritra ny vanimpotoanan'ny Firaisana Sovietika nataon'ny Birao Mikoyan-Gurevich Design Bureau.
Bechtel hitantana ny fananganana seranam-piaramanidina Sydney Andrefana vaovao
UK dia namoaka ny valiny farany amin'ny fiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro